तथापि, जो परिवहन को मोड भन्दा राम्रो छ? मा एक ट्रेन सेव, हामी पाठ्यक्रम biased को हो र विचारमा रेल यात्रा टाढा उच्च हो यातायातका प्रकार! के राम्रो छ भनेर जान्नको लागि तल पढ्नुहोस् र हामीलाई रेल यात्रा मा विमान यात्रा बनाम मा हाम्रो पोष्टमा डुबुल्की लगाउन दिनुहोस्.
हवाई यात्रा पनि हुन जानिन्छ आफ्नो गन्तव्य पुग्न तेज तरिका, तथापि, यो मात्र विचार उडान नै लिइरहेको छ. कति टाढा आफ्नो उडान को अग्रिम तपाईं लामो चेक-इन र सुरक्षा लाइन पार गर्न पुग्नु छ के? यदि तपाईंले झोलामा चिन्ह लगाउनुभएको छ भने तपाईंले यस समयमा संकलन गर्न पर्खनु पर्छ - यो समय खपत हुने. विमानस्थलको विपरीत, रेलवे स्टेशन मा कुनै चेक इन वा सुरक्षा रेखाहरू छन्, त्यसैले तपाईं अघि स्टेशन घण्टा हुन छैन आफ्नो यात्रा. सबैभन्दा प्रमुख रेल स्टेशन दायाँ उनि सेवा शहर को दिल मा स्थित हो. तपाईं रेल लिन ज्यादातर जब, तपाईं आफ्नो गन्तव्य मा सिधै आइपुग्छन्. तथापि, एउटा विमान लिएर, तपाईं घण्टा र विमानस्थलबाट प्राप्त खर्च सक्छ.
जबसम्म तपाईं व्यापार वर्ग को लागि भुक्तानी छन्, आफ्नो ठाउँ सामान्यतया एक हवाइजहाज सीट मा प्रतिबन्धित छ. एक रेल मा, तपाईं सार्न सक्नुहुन्छ थप खुला, र तपाईं आफ्नो सिट वरिपरि थप legroom हुनेछ. आफ्नो उडान समयमा, तपाईं आफ्नो सीट देखि सार्न बन्द गर्न सीट बेल्ट साइन लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्छ. तथापि, एक रेल मा तपाईं aisles तल सार्न, एक खानको वा कफी हथियाने, र संसारलाई यताउता हेर्दै. एक सुंदर रेल सवारी एक छुट्टी हुन सक्छ. Most European trains also offer free WiFi – something which cannot be yet said for all एयरलाइन्स.
रेल यात्रा पनि तपाईं आफ्नो लाग्यो पाल्तु जनावर संग आराम यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ. धेरै जान्छन् स्वास्थ्य कारण हवाई यात्रा गर्न अनुकूल छैन, उमेर, वा नस्ल.
मा यात्रु युरोपेली रेल कुकुर लाग्न सक्छ, बिरालोहरु, र अरु साना जनावरहरू तिनीहरूसँग र प्रायः कुनै अतिरिक्त लागतमा!
थप जानकारीको लागि, पछ्याउन Save A Train on Facebook, इन्स्टाग्राम खाता, र twitter Accounts.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-versus-plane-travel%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)